Xiddiga khadka dhexe ee reer Croatia ee Luka Modric ayaa shaaciyey kooxda uu doonayo inuu kaga fadhiisto ciyaaraha, xilli uu sannadkii ugu dambeeyey heshiiskiisa Real Madrid socdo.
Kubbad-sameeyahan oo 12kii bilood ee ugu dambeeyey ee qandaraaskiisa Santiago Bernabeu ku dhex jira ayaa daboolka ka qaaday inuu doonayo inuu heshiis cusub saxeexo oo uu sii joogo Real Madrid illaa inta uu ciyaaraha ka fadhiisanayo.
Waraysi uu siiyey wargeyska Marca ayaa waxa uu ku sheegay inuu doonayo inuu sii ciyaaro kubadda cagta, isla markaana uu da’diisa 35 jirka noqotay aanay ka joojinayn inuu wali kubbad tayadeedu sarrayso soo bandhigo, balse uu qorshihiisu yahay inuu Santiago Bernabeu kusoo afjaro waayihiisa ciyaareed.
Afti laga qaaday taageereyaasha Real Madrid ayay 91 boqolkiiba isku raaceen inay doonayaan in heshiis cusub la siiyo Luka Modric oo uu sii joogo kooxda ugu yaraan sannad kale.
Laacibkan oo la hadlayay wargeyska Marca Salaasadii shalay ayaa yidhi: “Marar badan baan sheegay balse waynu arki doonaa waxa dhaca. Anigu mar walba jawaab isku mid ah ayaan bixiyaa, waana inaan dareemayo inaan diicanahay isla markaana aan doonayo inaan sii joogo Madrid.
“Waxa aan dareensanahay inaan kooxda caawin karayo. Haddii aad i weydiiso waxa aan doonayo, dabcan, waxaan rabaa inaan sii joogo. Waxaan doonayaa inaan xirfaddayda halkan ku dhamaysto balse waxay taasi ku xidhan tahay waxyaabo badan. Laakiin ma jirto meel aan kaga farxad badanahay inaan halkan ku dhamaysto waahayga ciyaareed.”
Wargeyska Marca ayaa bishii July ee sannadkan sii sheegay in Luka Modric uu saxeexi doono heshiis cusub oo sannad ah oo uu kusii negaan doono Santiago Bernabeu laakiin illaa hadda ma jirto wax rasmi ah oo ay labada dhinac isla meel dhigeen.